Wararka Maanta: Sabti, Sept 9 , 2017-Faah-Faahin: Wiil timo-jara ah oo xalay lagu dilay Magaalladda Muqdishu
Kooxdii dilka geysatay ayaa la sheegay in ay goobta isaga baxsadeen.
Laammaha ammaanka ee degmadda Warta-nabada, oo howlgallo sameeyay ayaan la oggeyn cidii ay kusoo qabteen.
Dilka wiilka dhillinyarada ah waxaa uu kusoo beegmayaa xili kooxo hubeysan oo ka tirsan Al Shabaab ay xalay duleedka Magaalladda Muqdishu ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka Booliska ee dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale Wasiirka amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow, oo Khamiistii golaha Wasiirradda warbixin dhanka amniga ah siinayay ayaa sheegay in ammaanka dalka Soomaaliya uu aad u fiicanyahay, ayna socdaan dadaallo lagu sii xoojinayo.
Wasiirka ayaa sheegay in magaalladda Muqdishu iyo gobollada dalka ay ka socdaan howgallo lagula dagaallamayo Al Shabaab iyo kooxaha kale.